Iska Illaali Shaaha Aadka U Kulul Waayo Xanuunkaan Ayuu Sababaa - Daryeel Magazine
Iska Illaali Shaaha Aadka U Kulul Waayo Xanuunkaan Ayuu Sababaa
Khubaro caafimaad oo u dhalatay dalka Iran ayaa waxa ay ku ogaadeen in cabbista shaaha aad u kulul uu xiriir la yeelan karto kansarka ku dhaca hunguriga.
Natiijada daraasaddan oo ay daryeelmagazine.com ay ka soo qadaatay Joornaalka British Medical Journal oo ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in shaaha bigeyska ah, ee heer kulka karintiisu marka hore gaaray 70 degree heerka qiyaasta kulku ay siyaadiso halista uu qofku u yahay cudurka Kansarka noociisa ku dhaca hunguriga. Khubarada daraasadda samaysay waxa ay tijaabo ku sameeyeen 300 oo qof oo qaba cudurka Kansarka ku dhaca hunguriga iyaga oo si cilmiyeysan u baaray caadooyinka dadkan ee shaah cabbista,
Waxa ay sidoo kale daraasaddani muujisay in shaaha oo dhaqso loo cabbo, tusaale ahaan qofka oo koobka shaaha cabbistiisa bilaaba in ka yar laba daqiiqo markii laga sii dhigay dabka ama laga shubay falaastu ay 5 laab kor u qaadayso khatarta ku jirta ee ah in uu sababi karo kansarka hunguriga ku dhaca, gaar ahaan marka la barbar dhigo dadka cabbista shaaha iyo shubistiisa u dhexeysiiya 4 daqiiqo iyo ka badan.
Sida la og yahay dadka shaah cabka ah waxa ay xiiseeyaan in ay shaaha kulayl ku cabbaan laakiin in badan ayaa taas laga digay caafimaad ahaan. Daraasado hore ayaa muujiyey in sidoo kale khamri cabbista iyo sigaarkuba ay keenaan kansarka halista ah ee ku dhaca hunguriga. Shaahu waxa uu ka mid yahay cabbitaannada dunida oo dhan mideeya, in kasta oo qaabab kala duwan loo sameeyo, caleenta shaahuna noocyo iyo magacyo kala duwan leedahay haddana in badan waxa ay khubaradu sheegaan in shaahu dhinacyo badan gacan uga geysan karo caafimaadka qofka.
Shaaha oo ah cabbitaan kulaylka lagu isticmaalo waxa aad looga cabbaa guud ahaan dhulka ay Soomaalidu deggen tahay. Waxaana la aaminsan yahay in Ragga Soomaalidu ay Shaaha u cabbaan tamar raadin iyo in uu kulanka sheekada iyo haasaawaha ah u qurxiyo, waxa aanay inta badan dhaqan ahaan aaminsan yihiin in Shaahu yahay cunto rag, “Rag waa shaah dumar-na waa sheeko”. Farsamooyinka kala duwan shaaha loo sameeyo sida, Shaaha madaw, Shaaha cagaaran iwm. Iyo weliba deegaannada uu ka baxo oo kala duwan ayaa keenay in uu yeesho saamayn kala duwan mararka qaarkoodna iska hor imanaysa.
Xanuunada Lagu Daweeyo Cabbista Biyaha Kulul & Xilliyada ku Haboon in la Cabo 4 Sababood Oo Innagu Qasbaya In Aynu Kafeega Subaxda Hore Ku Beddelno Shaaha Cagaaran Nala Baro Faa’iidooyinka Cajiibka Ah Ee Shaaha Cagaaran Cuntooyinka Ka Hortagga Wadne Qabadka Sida Aadka Ahna U Nadiifiya Xididdada Wadnaha